သစ်ကောင်းအိမ် – ငွေလရောင်ရဲ့တိမ်းရှောင်သူ – အပိုင်း (၃) | MoeMaKa Burmese News & Media
ခင်ဇော်မိုး ● ဗွီဒီယို
ကိုကံညို (ထူးကြီး) - “ဒီလို…မချစ်ဘူး…မပြောပါနဲ့”
စိုးခိုင်ညိန်း ● တောင်ပေါ်မြစ်
လင်းသက်ငြိမ် ● ကိုယ်တို့မြို့
ကျော်ထင် ● အမွေဆိုး
စိုးခိုင်ညိန်း ● လေထဲက ဖုန်မှုန့်တွေ
ကျော်ကျော် (မြရည်စမ်း) ● ချွေးစက်​​လေးများရဲ့သီအိုရီ
လင်းငယ် ● ကျယ်ကျယ်ဖော်
သစ်ကောင်းအိမ် – ငွေလရောင်ရဲ့တိမ်းရှောင်သူ – အပိုင်း (၃)
(မိုးမခ) ဇန်န၀ါရီ ၂၈၊ ၂၀၁၅
နှစ်တနှစ်အရောက်တွင်တော့ ထုိုသူ့လက်ထဲသို့ စိတ်ပုတီးတကုံး ရောက်လာပါသည်။ သူ့၏ နှုတ်ကမူ တလှုပ်လှုပ်နဲ့ ဘာတွေရွတ်ဆုိုနေသည် မသိ။ လဘက်ရည်ဆုိုင်ထုိုင်ရင်လည်း ထုိုပုတီးနှင့် ..။ သို့သော်လည်း သူ့နုိုင်ငံရေးသိပ္ဗံကုို စိတ်အားထက်သန်စွာဆွေးနွေးနေချိန်နှင့် ကမ္ဘာ့ရေး၊ မြန်မာ့ရေးသတင်းများအလယ် သူနစ်မြှုပ်နေချိန်များတွင်တော့ သူ့စိတ်ပု တီးသည် စားပွဲခုံအောက် သူ့ခြေထောက်နားတွင် ပြုတ်ကျလျက် …။ မြင်တွေ့သူ ကျနော်တုို့တယောက်ယောက်က ကောက် ယူကာစားပွဲပေါ်သို့ ပြန်တင်ပေးထားရတတ်ပါသည်။
ကျောင်းပိတ်ရက်နေ့လယ် တနေ့ခင်း ကျနော်တုို့ညီအကုို၏တသုိုက် မျိုးကုိုတုို့အိမ်တွင် ထုိုကာလက ထွက်ခါစ ခုိုင်ထူးရဲ့ မကျေနပ်ဘူးသိလား .. သီချင်းတိတ်ခွေကုို စုဝေးနားထောင်နေခုိုက် ပုတီးတကုံးနဲ့ သူရောက်ရှိလာကာ နေရာလွတ် ခုံတန်း လျားတခုတွင် ဝင်ထုိုင်ရင်းကျနော်တုို့ ညီအကုိုတသုိုက်နဲ့အတူ အကြင်နာသစ်ဆု … အကြင်နာသစ်ဆု … ကုို ဝင်တောင်း ရမ်းရင်း ပုတီးစိတ်နေပါသည်။ ထုိုစဉ် ဘယ်အချိန်ကာလတည်းက သူ့ပုတီးစိတ်နည်းကုို စပ်စပ်စုစု လေ့လာထားသည် မသိသော ကျနော့်အကုို အောင်ကုိုကြီးက ကုို (….) ခင်ဗျားစိတ်တဲ့ပုတီးက ဒီနေ့ ဘာလုို့တလုံးလျော့နေရတာလည်း ၏ဟူ၍ အမေအမြန်းထထူပါတော့သည်။
သူကတော့ သူ့ကုိုယ်ပုိုင် အေးဆေးလေးလံသော လေသံဖြင့် …
….ဒီနေ့ အိမ်မှာ ငါ့အဘုိုးကြီးက ဘလုိုင်းကြီး ငါ့ကုို ပြသနာရှာတယ်ကွာ။ အဲဒါကြောင့်.. ။ အရင်က ငါက အနန္တောအနန္တငါးပါး စိတ်တာ။ ဒီနေ့ အဘုိုးကြီးနဲ့ ကွိုင်တက်လာလုို့ တပါးလျော့ပြီး အနန္တောအန္တလေးပါးပဲစိတ်တဲ့အနေတဲ့ ပုတီးကုို တလုံးလျော့ စိတ်တာကွ… ဟူ၏။ (သူက ပုတီးစိတ်လျှင် သူတပါးတွေလုို တလုံးချင်းမစိတ်ဘဲ တခါတည်း ငါးလုံးဆွဲ၍ စိတ်ပါသည်)
ထုိုနေ့တွင်တော့ တခါစိတ်လျှင် ပုတီးလေးလုံးသာ အတိအကျဆွဲ၍ စိတ်နေပါတော့သည်။ သူကား သူ့သီအုိုရမ် သူထုတ်ကာ သူ့ခုိုင်လုံမှုအပြည့်နဲ့သူ..။
တခါတွင်လည်း ဘယ်သူက လဘက်ရည်ဆုိုင်ကုို အရင်စရောက်၍ ဘယ်သူ့က ဘယ်သူ့ဝုိုင်း ဝင်ထုိုင်နေမိတယ် မမှတ်မိ တော့..။ ထုိုသူနှင့်ကျနော် နှစ်ယောက်တည်း လဘက်ရည်ဆုိုင်စားပွဲတခုမှာ နှစ်ယောက်အတူထုိုင်လျက်..။
သူကား ကျနော့်ကုို လုံးဝစကားမပြော လှည့်မကြည့် သူ့အတွေးနဲ့သူ တုိုင်းပြုပြည်ပြု အခြေခံဥပဒေမူကြမ်းကုိုရေးဆွဲလျက်..။ ကျနော်ကလည်း သူတိတ်ဆိတ်နေတော့ ကုိုယ်ဘာကုိုယ် နားအေးပါးအေး …. ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ မူမမှန်ခြင်းကုို ဆင် သလုိုလုို ထင်ကြတယ် ထင်တာတွေ မထင်မရှားနဲ့ မုိုးရယ် ဘယ်ဆီမှာညိုဦးမယ်…ဟု ဆင်ရာတိမ် မုိုးနေခုိုက် … ရုတ်တ ရက်ကြီး ထကာ….
.. ရှုပ်တယ်ကွာ ဇော်ကြီး…။ တုို့တုိုင်းပြည်က သေးသေးလေး။ မင်းမြေပုံ ပြန်ကြည့်ကြည့်။ လူမျိုးက ဘယ်နှမျိုးမှန်းတောင် ရေလုို့မရ.. ။ တုို့တုိုင်းပြည်မှာ တုိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တတ်တဲ့ကောင်ကလည်း တယောက်မှမရှိ။ ဥပမာ ဖဆဖလခေတ်ကုို ကြည့် ကွာ။ အဲဒီတော့ ငါတုို့ တုိုးတက်တဲ့နုိုင်ငံတခုက အစုိုးရလုပ်တတ်တဲ့သူတွေကုို လစာကောင်းကောင်းပေးငှားပြီး တုိုင်းပြည်အုပ် ချုပ်ခုိုင်းမယ်။ သူတုို့ကောင်းကောင်းမအုပ်ချုပ်တတ်ရင် အစုိုးရအလုပ်က အချိန်မရွေးဖြုတ်ပစ်ပြီး နောက်ထပ် အရည် အချင်းပြည့်ဝသူကုို ခန့်ထားမယ်။ ကိုယ့်ဝန်ထမ်းပဲဟာ။ အဲလုိုဆုို မကောင်းဘူးလား …ဟု သူ့စိတ်ရူးကုို ကောက်ကာငင်ကာ မဲထည့်ခုိုင်းတော့ အင်း.. ကောင်းသားပဲ..ဆုိုတာကလွဲပြီး ကျနော်မှာ ဘာထပ် ပြောရမယ်မှန်းမသိ..။ သူကတော့ သူ့စိတ်ရူး သူသဘောခွေ့ကာ ပြုံး၍များတောင် နေလုိုက်သေးသည်။
Painting by ZL Feng
အလားတူ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ စာများ၊ ဆောင်းပါးများ ...:စာစုတို, သစ်ကောင်းအိမ်